८ महिनापछि प्रदर्शन हुँदै ‘परदेशी २’
नेपाल लाइभ शुक्रबार, माघ ९, २०७७, १४:०४
काठमाडौं–कोरोनाले थला पारेको फिल्म क्षेत्र बिस्तारै उठ्ने जमर्को गर्दैछ। शिव श्रेष्ठको ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ प्रदर्शनपछि अर्को चलचित्रले पनि प्रदर्शन मिति तोकेको छ। चलचित्र ‘परदेशी २’ ले २०७८ को दसैंलाई प्रदर्शनको मिति तोकेको हो।
५० दिन लगाएर छायाँकन गरिएको भनिएको फिल्मको कथा रमेश बिजिले तयार पारेका हुन्।
फिल्ममा दिलिप रायमाझी, नीर शाह, प्रशान्त तामाङ, केकी अधिकारी, बर्षा सिवाकोटीलगायतको अभिनय रहेको छ। साथमा अहिलेका चर्चित युवा गायक तथा मोडल प्रकाश सपुतले पनि यही फिल्ममार्फत् डेब्यु गर्दैछन्।
सुदीप कुँवरको मुख्य सहायक निर्देशन रहेको फिल्ममा मानकृष्ण महर्जनको छायाँकन रहेको छ। अष्ट महर्जनको द्वन्द्व, बिबि अनुरागीको संगीत तथा गोविन्द राई र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रहेको छ।
नारायण इन्टरनेशनल प्रालिको ब्यानरमा बनेको फिल्ममा राजेश वंशल र नारायण रायमाझीको लगानी रहेको छ।
अध्ययनका लागि विदेशिने नेपाली युवाहरुको विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर फिल्म निर्माण गरिएको छ। नारायण रायमाझीले निर्देशन गरेको फिल्मको पहिलो सिक्वेल परदेशीलाई दर्शकले निकै मन पराएका थिए।
हेर्नुभयो त नेपालमा खिचिएको साउथ इण्डियन फिल्म 'दिल धडक धडक'? २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर खिचिएको दक्षिण भारतीय फिल्म 'दिल धडक धडक' युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ। फिल्म... शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
फिल्म गोर्खे शुक्रबारदेखि हलमा नेपाली फिल्म गोर्खे शुक्रबारदेखि नेपालभरका हलमा प्रर्दशन भएको छ। काठमाडौंमा रहेका सिनेमा घरले गोर्खेलाई कम्तिमा पनि २ सो दिएको निर्म... शुक्रबार, फागुन २१, २०७७
यसरी चल्यो ट्वीटरमा ‘अजय देवगण कायर हो’ काे ट्रेन्ड भारतमा लामो समयदेखि तीन नयाँ कृषि कानूनविरुद्ध किसानहरूको आन्दोलन जारी छ। बलिउडका कतिपय कलाकारले यस विषयमा खुलेर आफ्नाे विचार दिएका... बुधबार, फागुन १९, २०७७
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा विवाद पनि कति कति! बिहीबार, फागुन २०, २०७७